Chikumi 2018 | Save A Train
Mwedzi: Chikumi 2018
musha > Chikumi 2018
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi Zvitima mu Europe vane hombe chinhu; tinoda njanji edu, uye isu tichati kusarudza navo pamusoro mimwe mhando zvokufambisa chero nguva. Kunze kuwana kubva nguva A anogumira B mune hadzi, akasununguka uye yakavimbika netsika, pane zvakawanda kwazvo…
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi A itsva chitima mutsetse wakatanga kurwisa, chokufuka Azerbaijan, Teki, uye Georgia. The mutsetse runofukidza 820 Makiromita uye rinokwana freights kuwedzera mutakurwi nezvitima. Chekutanga, muganhu uchava wokutanga kubatanidza Europe uye China vachigere pavaigona kutora chikepe chaienda Russia. Chitima chinoshanda kubva…
Nguva yekuverenga: 4 maminitsi Budapest zvechokwadi nomusimboti Hungary. Chinhu chinokosha pfungwa panyaya vaienda nechitima muBudapest mune nezvitima zhinji rega. Nepo Travel nechitima muBudapest uye zvavo zvinonakidza uye kazhinji chiitiko chitsva kuvanhu vazhinji,…